Ciyaartoyda Barcelona Oo Dhamaantood Iskaga Tegi Karaya Kooxda Bisha January Iyo Tallaabada Kooxdu Qaadayso Ee Halista Ah - Gool24.Net
Ciyaartoyda Barcelona Oo Dhamaantood Iskaga Tegi Karaya Kooxda Bisha January Iyo Tallaabada Kooxdu Qaadayso Ee Halista Ah
Barcelona ayaa halis ugu jirta in dhamaan ciyaartoydeedu ay iskaga tagaan marka la gaadho bisha January ee sannadka cusub kaddib markii ay kooxdu bilowday inay dib ugu noqoto mushahar bixinta oo hoos u dhigto, taas oo ay ku jiraan ciyaartoydu.
Kooxda reer Spain ayaa waxay usbuucan shaacisay khasaare weyn oo ay gashay intii uu jiray Korona Fayrasku, taas oo iyadoo mushahar dhimis 70% ah ku samaysay ciyaartoydeeda haddana uu hoos usii dhacday dhaqaalaheedu.
Balugrana ayaa waxay hadda qaadaysaa tallaabo kale oo ay mushaharka ciyaartoyda iyo shaqaalaha caadiga ah hoos ugu dhigayso, taas oo keeni karaysa in kooxdu ay gasho qalalaase oo ciyaartooyo la’aani ku dhacdo.
Arbacadii shalay ayuu maamulka kooxdu u sheegay waax kasta oo kooxda ah ay muddo 15 maalmood ah iskaga soo saaraan hal qof oo u metala kulan lala yeelanayo shaqaalaha iyo ciyaartoyda oo lagu go’aaminayo mushahar dhimista cusub.
Sida uu qoray wargeyska Marca, kooxdu waxay u sheegtay in muddo bil gudaheed ah la hirgelin doono mushahar dhimista, lana samayn doono heshiisyo cusub oo meesha ka saaraya mushaharkii hore.
Wargeysku waxa uu intaa ku daray in ciyaartoyda kooxdu ay ka fiirsanayaan inay ku dhaqaaqaan sharciga ‘Workers’ Statute’ oo u ogolaanaya inay si rasmi ah uga bixi karaan qandaraaskii ay kula jireen kooxdooda mar haddii dhinaca naadiga uu ka jabay heshiisku oo aanay sidiisii u fulinayn.
Ciyaartoyda ayaa bisha January waxay ka tegi karayaan kooxda iyagoo waliba dalbanaya mushaharka 20 maalmood oo sannad kasta oo heshiiskooda ka hadhay, taas oo uu u ogol yahay sharcigu, dhibaato weyna ku ah kooxda haddii ay xaaladdu halkan gaadho.
Taariikhda hore looma arag ciyaartooyo ‘Workers’ Statute’ ku dhaqaaqa, balse Barcelona ayaa laga baqayaa inay noqoto kooxdii ugu horreysay ee ay arrintani qabsato.
Bisha January ayuu wargeyska Marca sheegay inay noqon doonto xuddunta go’aamada kooxda oo la ogaan doono haddii ay qalalaase geli doonto iyo haddii kale, iyadoo ay ciyaartoyda iyo kooxda hore ugu dhaxaysay xurguf iyo khilaaf ka dhashay mushahar dhimistii ay 70% ahayd ee ay sameeyeen markii uu xanuunkani dillaacay, taas oo keentay in warbaahinta ay xiddigaha qaarkood ku adeegsadaan inay kooxdooda ku dhalleeceeyaan.
Maamulka LaLiga ayuu warku sheegay in aanay awood u lahayn inay ciyaartoyda Barcelona ka hor istaagaan inay iskaga baxaan kooxdooda haddii ay ‘Workers’ Statute’ ku dhaqaaqaan, sababtoo ah, waxa ay heshiisyadu ka jabeen dhinaca kooxda.
Si kastaba, haddii xaaladdani ay timaaddo, Barcelona ayaan bilaash kusii deyn doonin ciyaartoydeeda baxaya, waxaanay samayn doontaa xeelad ay lacago kaga samaynayso iyadoo iibin doonta kuwooda madaxa taaga ee go’aansada inay albaabka ka baxaan.
Barca baba ayeye kuron tahye intuu joogo madx wayenahaa bortum